देहातमा कोरोना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कोरोनाको चर्चा सुदूर देहातसम्म पुगेको छ । कोही फागुको हास्य थप्दै कोरोना भाइरसलाई ‘करोनावाली भउजी’ त कोही ‘कोरोना भइया’ भन्ने गर्छन् । तर यस्तो परिहासले पनि विदेसिएका आफन्तको चिन्ता घटाउन सकेको छैन । खाडी मुलुकतिर कमाउन गएकाहरूको सुर्ता पनि कम छैन ।
चैत्र ६, २०७६ चन्द्रकिशोर
भैया लोग सुरक्षित हैं ।’ भारतीय राज्य पन्जाबमा बाहिरिया मजदुरलाई प्रायः ‘भैया’ भनेर बोलाइन्छ । त्यता काम गर्न गएकाहरूको हालचाल बुझ्न यताका आफन्तले फोन गर्दा तिनका साहू जवाफिने गर्छन्— भैयाहरू सुरक्षित छन् । कोरोना भाइरसको कोलाहलमाझ बांँचिरहेका आफन्तहरूका अनुहार कोलाजको स्वरूपमा त्रस्त देखिन्छन् ।
यताका आफन्त भन्छन्, ‘साहूको भनाइ नै हाम्रा लागि सबुर (धैर्य) हो ।’ फागु मनाइसकेपछि गाउँहरू रित्तिन थाल्छन् । खास–खास मौका मात्रै हुन्छ, गाउँ फर्किने । अहिले गएकाहरूमध्ये धेरैजसो असारतिर फर्किने गर्छन् । कोरोना महामारीका रूपमा फैलिने त्रासले भारतकै ठूला सहरहरूको गति मत्थर हुन थालेको छ ।
सीमान्त गाउँ बलरा–४ का देवधारी सहनीका छोराले पनि फागुलगत्तै गाउँलेहरूसंँग पन्जाब जाने रेल समाते । सहनी भन्छन्, ‘बाहिर जांँदैन भने खान्छ के ?’ मजदुरहरूका जत्था यसै गरी विभिन्न गाउँदेहातबाट निस्किएका छन् । ‘आइसोलेसन’ जस्ता शब्दले यिनीहरूका लागि अर्थ राख्दैनन् । रेलको साधारण डिब्बाको भीडमा कतिपय सामान राख्ने ठाउँ वा शौचालयको नजिक कोचिएर यात्रा गर्न बाध्य हुन्छन् । मजदुरहरूको विस्थापन देहातका लागि नयांँ होइन । सीमावर्ती भारतीय रेलवे स्टेसन बैरगनियामा भेटिएका यस्तै एक भैया मजदुर गीतिलयमा सुनाउँदै थिए, ‘वाग्मती रे बकया की धार नयनवां से नीर बही ... ।’ रौतहट जिल्लाको मुख्य नदी वाग्मती र बकैया क्षेत्रका खेतीहर मजदुरहरूको पीडा यी शब्दहरूले देखाउँछन् ।
पन्जाबको अर्थव्यवस्था, त्यहाँको सहरी–ग्रामीण जीवनमा नेपालको मधेश वा भारतीय राज्य बिहारका ‘भैया मजदुर’ अनिवार्य अंग बनिसकेका छन् । मधेशका पिछडिएका इलाकाहरूमा जीवन र विकास जुरमुराउनुमा तीन–चार दशकदेखि पन्जाबको कमाइ एउटा आधार बन्दै आएको छ । दुःखमा पनि सुखको अंश खोज्ने यी भैया मजदुरहरूले पन्जाबका गाउँदेहातका खेत–खलिहानमा भोजपुरी गीत ‘बगल बाली जान मारेली’ घन्काउँदै त्यहाँको कृषि र औद्योगिक जीवनमा प्राण भर्ने गरेका छन् ।
कोरोनाले हस्तक्षेप गर्दै गएको सामाजिक–आर्थिक बदलावका क्रममा भयमुक्त समाजको अवधारणाको प्रासंगिकता र अर्थ निश्चय नै महत्त्वपूर्ण छ । पीँधमा रहेकाहरू बाहिर खटिँदा वा आफ्नै थलोमा प्रतीक्षा गरिरहँदा उत्तिकै तनावमा छन् । पारिवारिक र सामुदायिक स्वास्थ्यबारे थोरबहुत बुझ्न थाले पनि कोरोना कोलाहलमाझ काम गर्न जानु त छँंदै छ, बजारको असरले समेत यिनै वर्ग चेपुवामा छन् । अनौपचारिक स्थानीय अर्थतन्त्रमा रहने यिनै वर्गको साझेदारी र सरोकार अहिले संकुचित हुन थालेको छ । काम गरेर दैनिक गुजारा गर्ने मजदुरहरूलाई कोरोनाको हल्लाले नै हल्लाइदिएको छ । नेपालकै सहरबजारमा जो रिक्सा चलाउँछन्, कवाड वा भवन निर्माणका काम गर्छन्, साइकल गुडाएर व्यापार वा तरकारी र फलफूल बेच्छन्, अनि समूहमै बस्छन्, तिनीहरूले आफ्नो काम कसरी रोक्न सक्लान् ? सडकमै बसोबास गर्नेहरू कहाँ ओत लाग्लान् ? यी प्रश्नलाई उपेक्षा गर्न सकिँदैन, किनभने कोरोना–कहर कुनै वर्गविशेषमा मात्र पर्ने होइन । अनि भुइँमान्छेहरू कसरी जोगिन्छन् ?
तेस्रो मुलुक आउजाउ गर्नेहरूको लेखाजोखा गरिन्छ । विमानस्थलमा चेकजाँंचको प्रणाली छ । तर मजदुरीका लागि भारतका विभिन्न राज्यमा आवतजावत गर्नेहरूको अभिलेख छैन । को, कहाँ, कसरी बसेका छन् वा को, कसरी, कुन अवस्थामा फर्किए भन्ने कुराको हेक्का राखिएको छैन । खुला सीमा भएका कारण यो चुनौती व्यवस्थापन गर्न कतिपय नाका क्षेत्रमा आपत्कालीन प्रबन्ध गरिए पनि काफी छैन । यस्तोमा कोही भारतीय राज्यबाट फर्किंदा अनेक अफवाह फैलिन थालेका छन् । जरुरी सूचनाहरू थिचिन पुगेका छन् । झुटको संक्रमण कुनै भाइरसको जोखिमभन्दा कम हुँदैन । आत्तिएर भारतीय राज्यहरूबाट फर्किनेहरूले त्यहाँ आफ्नो पूरै पारिश्रमिक लिन त भ्याएका थिए ? फेरि मजदुरी कसरी पाउने ? यी मजदुरहरूले ब्यहोरेको क्षतिको आकलन कसरी हुने ? भुइँतहका यस्ता सरोकारबारे कसले बोलिदिने ? नेपालकै विभिन्न हिस्सामा मजदुरी वा अनौपचारिक व्यवसाय गर्नेहरूका लागि अन्तरप्रदेश प्रवासी मजदुर अधिनियम बनाउनुपर्ने आवश्यकता अहिले देखिएको छ ।
कोरोनाको त केवल हल्ला छ, तर यहाँ घरेलु उत्पादन मदिरा नै ‘ज्यानमारा’ देखियो । फागुको छेउछाउमा धनुषामा केही मान्छेको ज्यान गयो । यसरी अवैध उत्पादन भएको मदिरा सेवन गरेर मान्छेको ज्यान गएको धनुषा न त पहिलो जिल्ला हो न अन्तिम नै । तर यस पटक के भइदियो भने, कोरोनाको कोलाहलले यो खबर थिचिन पुग्यो । यसरी ज्यान गुमाउनेहरू कुन तह र तप्काका थिए ? अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेहरू कुन वर्गका हुन् ? केही पहिला त बारा जिल्लामा उत्पादन गर्ने परिवारकै सदस्यहरूले ज्यान गुमाए । यस प्रकारको मदिरा उत्पादनलाई कसले संरक्षण दिइराखेको छ ? बेलाबेला मदिरा नष्ट गर्ने अभियानको अभीष्ट के हो ? छिमेकी बिहारमा मदिरा बेचबिखनमा रोक लागेपछि सीमावर्ती नेपाली क्षेत्रमा फस्टाएको रक्सी व्यापारको अर्थराजनीतिबारे सोच्न ढिलो हुँदै छ । भुइँमान्छेको दैनिकीमा यो आफ्नै खालको कोरोना कहर छ । मृत्युका अनन्त विकल्पमध्ये एउटा हो— कोरोना । दैनिक बांँच्नका लागि गरिरहनुपर्ने संघर्षमाझ सम्भावनाहरूको दीयो जोगाइराख्ने विजयगाथा नै हो, भुइँमान्छेहरूको दैनिकी । यो तप्काका लागि अनेक कहरले पलपल पछ्याइराखेका हुन्छन् । भुइँमान्छेहरू रुँदै रहे फुनगी (टुप्पी) मा बस्नेहरूले समेत चैन पाउँदैनन् ।
फेरि पनि स्थानीय सरकारको भूमिका भुइँतहमा खोज्नुपरेको छ । यथार्थ के हो भने, ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना आफैंमा बिरामी छ । यस्तोमा घरछेउको सरकारले को–को, कहाँ–कहाँबाट आए, त्यसको सही सूचना राख्न सक्छ । बाहिरबाट फर्केकाहरूको स्वास्थ्य निगरानीमा समुदायको सहयोग बटुल्न सक्छ । कोरोना भाइरस नेपाली माटाको उत्पत्ति होइन । यो हाम्रा लागि सुखद अवस्था हो । संक्रमणको जोखिम बाहिरबाट आउनेहरू वा तीसँग सम्पर्कमा रहनेहरूलाई बढी छ । यस्तोमा बाहिरबाट फर्किएकाहरूको स्वास्थ्य निगरानी र सूचनाले नै हामीलाई जोगाउन सक्छ । संक्रमणबाट उम्किने उपाय भनेकै स्वयंको सजगता हो । परिवारका सदस्यहरू नै यस्तोमा पहिलो सूचनादाता बन्न सक्छन् । सूचना लुकाए सबै चौपट । सूचना दिए रोकथामका अनेक बाटा खुल्न सक्छन् ।
महामारीको जोखिम होस् वा प्राकृतिक विपदा, त्यससंँग जोडिएर आउने सावधानी र रोकथाममा स्थानीय सरकारहरू संलग्न हुँदै रहे प्रादेशिक एवं संघीय सरकारलाई टेवा पुग्न सक्छ । स्थानीय सरकारहरूको सक्रियताबिना सामानको कृत्रिम अभाव वा महँंगी नियन्त्रण दिवास्वप्न हो । कोरोनाले शक्तिसम्पन्न मुलुकहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दै लगेको यो समय सही सूचनामाथिको पहुँचले नै हामीलाई जोगाउन सक्छ । बहुतहका सरकारले कोरोना त्रास व्यवस्थापनमा आआफ्नो हिस्साको कार्यभार पूरा गर्नमा अकर्मण्यता देखाए पनि आममजदुर दिनभरिको काम सकेर राति मस्तसँंग निदाउनुपूर्व चैतावरको राग अलाप्छन्—
आयल चइत उतपतिया हो रामा... प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०९:०५
श्रेस्तेदार ३० हजार घूससहित पक्राउ
चैत्र ६, २०७६ लालप्रसाद शर्मा
पोखरा — जिल्ला अदालत कास्कीका श्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुली ३० हजार घूस रकमसहित हिजो राति पक्राउ परेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखराको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। पोखरा ५, प्रर्स्याङको एक मदिरा पसलमा मुद्दाको पक्षसंग घूस रकम लिंदै गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
संगठित अपराध सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिको गाडी छुटाइदिने भन्दै उनले रकम मागेको स्रोतले जनाएको छ। पराजुली केही दिन अघिमात्रै सर्बोच्च अदालतमा सरुवा भएका थिए।
प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:५७